Buyisela iPass vs 250ok: Isoftware Nemisebenzi Yokuthunyelwa Kwe-imeyili | Martech Zone
Kungani kubalulekile ukulethwa kwe-imeyili? Ngokusho kwe- Umbiko we-Email Data Quality Trends ka-2015 ngo-Experian, ama-73% wabakhangisi babike ukuthi banezinkinga ngokulethwa kwe-imeyili. I-Return Path inayo kubika ukuthi ngaphezu kwe-20% ye-imeyili esemthethweni iyalahleka. Akungabazeki ukuthi, amabhizinisi ahlangabezana nezinkinga ngokulethwa, futhi lokho kunomthelela omubi entweni engezansi.
Kwaphela iminyaka, Buyisa Indlela ube ngumholi wemboni esikhaleni sokulethwa kwe-imeyili ngaphandle kokuncintisana okuningi, uma kukhona,. Ngokufika kwe- 250ok, kanye nesisekelo samakhasimende esifaka izinkampani ezifana ne-Adobe, Marketo, kanye ne-Act-On, imboni ekugcineni inesemthethweni enye indlela yokubuyisa iNdlela isoftware yokulethwa kanye nezinsizakalo zobungcweti.
Bhalisela ukuvakasha komkhiqizo
Lapho uqhathanisa i- Return Path ne- 250ok, izihloko ezintathu zivame ukuvela - Izitifiketi, Idatha yePhaneli Ye-imeyili, kanye Nezinsizakalo Zobuchwepheshe.
Ukubuyiselwa Kwendlela Yokuqinisekisa
Isitifiketi besiyisinkwa nebhotela le-Return Path iminyaka. Ngokusho kowayeyikhasimende langaphambili online, bekuvamise ukuthi kube nesisindo sayo ngegolide. Namuhla, isisekelo seSitifiketi sibonakala sisekelwe kubathengisi be-imeyili abaqondanisa izinhlelo zabo ze-imeyili nemikhuba emihle. Ngemuva kokuhlangabezana nalelo zinga lokuqala, amakhasimende adingeka ukuthi aqhubeke nokuhlala ngaphakathi kwalawo mamethrikhi ngaso sonke isikhathi abaqinisekisiwe ngaso. Ukwenza kanjalo, njengoba ubungalindela, kuholela ezinkingeni zokulethwa.
Kulawo makhasimende ahlala ngaphakathi kwamamethrikhi, athenjiswa kuthuthukiswe ukulethwa kwe-imeyili ku-AOL, Yahoo, Microsoft, Comcast, Cox, Cloudmark, Yandex, Mail.ru, Orange, SpamAssassin, ne-SpamCop.
Kodwa-ke, uMqondisi weGlobal Deliverability e-Oracle, uKevin Senne, ubike ukuthi banezibonelo zamakhasimende ahambisana nezitifiketi anezinkinga zokulethwa nabanye babalingani be-internet service provider (ISP) abakhangisiwe. Kungaba okuthokozisayo ukwazi ukuthi ukuvinjelwa kaningi kozakwethu be-ISP kwenzeka kanjani kumakhasimende ahambisanayo, nokuthi kwenzeka kanjani lokho.
Ngokuya nge-Return Path, i-Gmail imvamisa yenza uhhafu wohlu oluningi, ngakho-ke isitifiketi asinikezi ukuphakanyiswa kobuchwepheshe lapho. Bayabika ukuthi amakhasimende ezitifiketi enza kangcono ku-Gmail kunabathumeli abangaqinisekisiwe, okuthile abathi bakwenza ngezindinganiso ezihamba phambili ezifuna amakhasimende ukuthi azilandele. Izindaba ezinhle lapha ukuthi noma ngubani angalandela imikhuba emihle ngaphandle kokukhokha iphenathi kunoma yimuphi umthengisi, kepha udinga ithuluzi lamathuluzi ukuqapha uhlelo lwakho.
Ngakho-ke, umbuzo omkhulu wamakhasimende wesitifiketi uwukuthi ukuthi impumelelo yabo yokulethwa ingakanani ebangelwa ukuba ngumthumeli onomthwalo wemfanelo uma kuqhathaniswa nokuphakanyiswa kobuchwepheshe okunikezwa kozakwethu be-ISP. Kumakhasimende wesitifiketi samanje, ukwenza ukuhlolwa kohlangothi nohlangothi kungaveza ukuthi ukuphakama kwabo kuvela kangakanani ekulandeleni izindlela ezinhle kakhulu uma kuqhathaniswa nokuphakanyiselwa kokukhokhelwa kokudlala abakuthola ngokusebenzisa abalingani be-ISP Yezitifiketi. Kuthatha umzamo othile ukuhlola, kepha abathengisi abaqhutshwa yidatha bayazi ukuthi ukulinganisa kuyisihluthulelo sempumelelo.
I-250ok ayinikezi isitifiketi. Indlela yabo isuselwa ekulandeleni izindlela ezihamba phambili, njenge-Return Path, kepha esikhundleni semodeli yokukhokhela ukudlala, banika amandla abathumeli abanedatha yesikhathi sangempela yokuphatha ngempumelelo uhlelo lwabo futhi bazuze idumela lomthumeli eliqinile.
Buyisela i-Path Email Panel Data
I-Return Path isebenzisa idatha yephaneli le-imeyili elihlanganiswe nezinhlu zezinhlamvu ukukala ukulethwa, ngenkathi 250ok isebenzisa izinhlu zembewu kanye nedatha yokubandakanya abamukeli.
Inkinga eyodwa engahle ibe nedatha yephaneli uma ama-panelists eyazi eyabo idatha iyimbiwa futhi ithengiswe kabusha. Ingabe bayinikile imvume? Uma kungenjalo, ingabe lokho kuyasebenza kumkhiqizo wakho? Futhi, angazi imvelaphi yephaneli ye-Return Path futhi uma abasebenzisi bevumile ukubamba iqhaza, ngakho-ke ngicela ubuze nabo.
Njengomakethi, ngithanda idatha yephaneli yokuqonda engakunikeza. Kepha esimweni sedatha yephaneli ye-Return Path, bona umbiko ukuthi ama-panelist angama-24% kuphela asebenzisa leyo akhawunti njenge-akhawunti yawo eyinhloko ye-imeyili.
Lapho usebenza nedatha yephaneli yanoma yiluphi uhlobo, kufanelekile ukubuza umthengisi ukuthi iphaneli ligcine ukubuyekezwa nini. I-Survivor Bias yinkinga ongafuni ukungena kuphaneli yakho. Futhi, hlola ne- Return Path.
Ngokubekwa kwebhokisi lokungenayo, inkinga imvamisa ukuthi idatha yephaneli izokhombisa ukubekwa kwebhokisi lokungenayo elingaphansi kuka-100% e-Outlook naku-Gmail ngenxa yokuhlungwa ngabasebenzisi ngabodwana. Ngenxa yalokho, abathumeli bangasala bezibuza ukuthi ngabe igebe lokubekwa ebhokisini lokungenayo libangelwa ukuhlunga kwezinga lomsebenzisi noma uma kunenkinga yangempela yokulethwa.
I-250ok ayisebenzisi idatha yephaneli le-imeyili. Kungumbono wabo ukuthi idatha engenzeka ilele ngaphakathi kwedatha yokuzibandakanya ongayisebenzisa nge-Informant ye-imeyili engu-250ok, enikezela ngemininingwane enemininingwane, yezinga lomsebenzi womsebenzisi, ngaphezu kwe analytics inikezwe ngumhlinzeki wakho we-imeyili (ESP). Ukuhlanganiswa kwalawa mathuluzi okuzokunikeza ubuhlakani be-imeyili obuningi kunabo bonke obutholakalayo.
Buyisela iNdlela futhi 250ok Imisebenzi Yomsebenzi
Zombili lezi zinkampani zinikeza ukubonisana ngokuhlinzekwa kumakhasimende. Umehluko omkhulu: I-Return Path yakhe iqembu langaphakathi labaluleki, ngenkathi 250ok ukhethe ukusebenzisana nezinhlangano ezingaphandle zokulethwa kwezidingo.
Akunandaba ukuthi ngabe ucabanga ukubuya kwePathal noma 250ok, kubalulekile ukubuza imibuzo enzima yomxhumanisi ozophatha i-akhawunti yakho. Kimi, akunandaba ukuthi ngabe ngisebenzisana nomxhumanisi ongaphakathi endlini noma i-ejensi yabalingani. Udinga umuntu oneminyaka, hhayi izinyanga, onolwazi, futhi badinga ubudlelwano kuma-ISP amakhulu uma kulungiswa umcimbi kuyadingeka. Cela ukuqala kabusha nezethenjwa zamakhasimende zomxhumanisi okuzoba ngumuntu wakho wephoyinti. Ukubambeka kumxhumanisi omncane ofunda iskripthi kungaholela enkingeni enkulu yohlelo lwakho.
Ukubuyekezwa okusheshayo kwefayela le- 250ok platform
Kusukela 250ok yipulatifomu entsha endaweni yesehlakalo, bengifuna ukumboza ngokushesha amamojula abo: Reputation Informant, Inbox Informant, Email Informant, Design Informant, ne-DMARC. Lapho usebenzisa wonke amamojula amane ekhonsathini, abathengisi banesethi ephelele yamathuluzi wokuhambisa okufanele baphathe kuwo izinhlelo zabo.
Idumela Informant - Idumela Informant kuhlanganisa ezihlukahlukene izici ukuqapha imeyili lakho idumela.
Enye yezinto ezidume kakhulu kufayela le- 250ok Isixazululo ngesabo inethiwekhi yesicupho esigaxekile semikhakha engaba yizigidi ezingama-35. Ukufinyelela kule datha kuyisicefe kubathengisi be-imeyili. Usayizi nekhwalithi yenethiwekhi yesicupho sogaxekile, nokufinyelela okuyimbudumbudu kuleyo nkathi yesikhathi sangempela (isb., Izingibe ezigoqwayo emini, i-IP, isizinda, ulayini wezihloko, izwe), kukhanga kakhulu kimi njengomthumeli. Ukuqashelwa kwabantu abamnyama? Le datha itholakala ngesikhathi sangempela, futhi ungasetha izexwayiso ezenziwe ngezifiso ukugxila ezinhlwini ezikukhathaza kakhulu. Ngikuthanda ukuguquguquka ekwenzeni ngokwezifiso ukuthi ngubani othola isexwayiso nokuthi leso sixwayiso silethwa kanjani (isb., I-imeyili, i-SMS).
Ideshibhodi ye-DMARC - Uma ucabangela ukukhula okucacile kwemizamo yogaxekile nobugebengu bokweba imininingwane ebucayi, nokuphendula kwakamuva kwe-Gmail, kube yisinyathelo esihle sokwenza lokho 250ok ukufaka ideshibhodi ye-DMARC. Ungasebenzisa "imodi yokubuka" futhi isoftware izohlaziya ukuthobela futhi iphakamise isenzo sokulungisa, esizokuholela ekugcineni kwenqubomgomo yokuhlukaniswa noma yokulahlwa. Umkhiqizo uhlanganisa ukwenziwa kwamamephu okusongela, ukubika kwe-forensic, nokuthola imigomo yokuhambisana.
I-250ok inikeza amandla okwenza i- ukuqapha iluphu yempendulo (FBL). Ukwazi lapho obhalisile ekhononda ngawe kubalulekile, ngoba ijubane lempendulo yakho liyinto enkulu ekugcineni abahlinzeki bezinsizakalo ze-inthanethi (ama-ISP) ukuthi bangezi phansi kusithunzi sakho.
Futhi, 250ok kuhlanganisiwe I-Microsoft Smart Network Data Services (SNDS) kanye ne-Signal Spam ku-UI elula ukugaya. Lolu lwazi lufika luvela kwaMicrosoft njengenqwaba yedatha eluhlaza, engahluziwe, futhi abanye abathengisi benze okuncane kakhulu ukuthuthukisa ulwazi lokusebenzisa leyo datha. 250ok wenze konke okusemandleni abo ukukwenza kube lula.
Ibhokisi lokungenayo Informant - Abakhangisi badinga amathuluzi wesikhathi sangempela asezingeni eliphezulu ukubasiza ukuthi bafike ebhokisini lokungenayo. I-Inbox Informant ikukhombisa ukuthi ingakanani imeyili yakho efinyelele kubhokisi lokungenayo, ugaxekile, nokuthi ilahleke kangakanani. Ungaphula izingqinamba ezithile zokulethwa kwe-imeyili ngomkhankaso, okusiza kakhulu.
Omunye umehluko omkhulu engiwubonile phakathi 250ok futhi i-Return Path ingumnikelo wohlu lwenzalo lwama-250ok. Ngaphambi kokubanjwa ngokuqhathanisa ukumbozwa, izimbewu kuphela ezibalulekile kubahlinzeki bebhokisi leposi lapho uthumela khona imeyili. Isikhathi. 250ok wakhe ithuluzi le-seedlist optimizer ukukusiza ukuthi ungene ngaphakathi kubabungazi ababalulekile. Sekukonke, kukhona umehluko omncane ekusakazweni kohlu lohlu lwezinkampani zombili izinkampani eziphethe imbewu ekhethekile, kepha kukhona okufana nalokho kuyo yonke imicimbi emikhulu. Zombili lezi zinkampani kungenzeka zinakho okudingayo noma okuzokuthola.
I-imeyili Informant - Emhlabeni oqhutshwa yidatha, ama-open nama-CTR awayitsheli indaba ephelele. Ukusebenzisa i-pixel yokulandela ngomkhondo engu-250ok nge-imeyili Informant ikutshela ukuthi obani ababhalisile abafunda umyalezo nokuthi isikhathi esingakanani, nokuthi hlobo luni lwedivayisi nohlelo lokusebenza abebelusebenzisa.
Yikuphi ukuxhumana noma ama-CTA asebenze kahle kakhulu? Ngabe uzithuthukisa izikhathi zokuthumela? I-imeyili Informant ikusiza ukuthi uqonde ukuthi yini okusebenzayo nokuthi yini engekho ukuze wenze izinqumo ezihlakaniphile, nezisheshayo.
Idizayini Informant - Wonke umthengisi we-imeyili udinga ukwenza ukuhlolwa kwangaphambi kokundiza kuzungeze ukwakheka, ngakho 250ok inokuhlanganiswa okungaphandle kwebhokisi nabathengisi abaholayo abahamba phambili Thumela i-imeyili ku-Acid futhi I-Litmus.
I-Design Informant ihlola ukudala kwakho ngokuqhathanisa nezihlungi ezivamile zogaxekile kufaka phakathi iBarracuda, iSymantec, iSpam Assassin, i-Outlook, nokunye okuningi ukuze ukwazi ukubona nokulungisa izimbangela zogaxekile ngaphambi kokufaka umkhankaso wakho.
Ngicabanga ukuthi ukuba nabathengisi ababili abafanayo kodwa abahluke kancane esikhaleni sokulethwa kwe-imeyili kuyinto enhle embonini. Uma uthenga isoftware yokulethwa, kufaka phakathi amathuluzi we-DMARC, noma izinsizakalo zokubonisana, ngincoma ukuthi uxhumane ne-Return Path futhi 250ok ngesiboniso, bese uziqhathanisa.
Siyabonga ngokufunda futhi uma unempendulo nge-Return Path noma 250ok imikhiqizo, sicela ukhululeke ukuhlanganyela nami leyo mininingwane, noma ubeke amazwana ngezansi.
Ukudalulwa: I-Oracle wuphawu lokuhweba olubhalisiwe lwe-Oracle Corporation kanye / noma izinhlangano eziphethwe yizo. I-Return Path wuphawu lokuhweba olubhalisiwe lwe-Return Path, Inc. 250ok wuphawu lokuhweba olubhalisiwe lwe-250OK LLC. 250ok bangabaxhasi besiza sethu futhi ngingumngane omuhle womsunguli uGreg Kraios.
Tags: androidI-Android 2.3Ukubuka kuqala i-imeyili ye-Android 2.3Isivivinyo sokubuka kuqala i-imeyili ye-Android 2.3I-Android 4.2Ukubuka kuqala i-imeyili ye-Android 4.2Isivivinyo sokubuka kuqala i-imeyili ye-Android 4.2Ukubuka kuqala i-imeyili ye-AndroidUkuhlolwa kokubuka kuqala i-imeyili ye-AndroidI-AOL MailThumela i-AOL i-ChromeUkubuka kuqala kwe-imeyili kwe-AOL nge-AOLUkuhlolwa kokubuka kuqala kwe-imeyili kwe-AOL mailUkubuka kuqala i-imeyili ye-AOL MailUkuhlolwa kokubuka kuqala i-imeyili ye-AOLI-AOL Mail Internet ExplorerUkubuka kuqala i-imeyili ye-AOL Mail Internet ExplorerIsivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili se-AOL Mail Internet ExplorerI-Apple Mail 6Ukubuka kuqala kwe-imeyili ye-Apple Mail 6Isivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili se-Apple Mail 6IBlackBerry 4 OSUkubukwa kuqala kwe-imeyili kweBlackBerry 4 OSIsivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili seBlackBerry 4 OSIBlackBerry 5 OSUkubukwa kuqala kwe-imeyili kweBlackBerry 5 OSIsivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili seBlackBerry 5 OSabamnyama abanolwaziUmbala UbumpumputheUkubuka kuqala kwe-imeyili yombala wobumpumputheUkuhlolwa kokubukwa kuqala kwe-imeyili kombalaukuhanjiswaI-DMARCukuvimba i-imeyiliukukhishwa kwe-imeyiliukuhlolwa kokuklanywa kwe-imeyilionolwazi nge-imeyiliidatha yephaneli le-imeyiliidumela le-imeyiliGmailUhlelo lokusebenza lwe-GmailUkubuka kuqala i-imeyili yohlelo lokusebenza lwe-GmailUkuhlolwa kokubuka kuqala i-imeyili yohlelo lokusebenza lwe-GmailI-Gmail ChromeUkubuka kuqala i-imeyili ye-Gmail ChromeUhlolo lokubuka kuqala lwe-imeyili ye-Gmail ChromeI-Gmail FirefoxUkubuka kuqala i-imeyili ye-Gmail FirefoxIsivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili se-Gmail FirefoxI-Gmail Internet ExplorerUkubuka kuqala i-imeyili ye-Gmail Internet ExplorerIsivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili se-Gmail Internet ExploreruGreg kraiosukuhlaziywa kwebhokisi lokungenayoinbox onolwaziukubekwa kwebhokisi lokungenayoipadUkubuka kuqala i-imeyili ye-iPadUkuhlolwa kokubuka kuqala i-imeyili ye-iPadipad miniUkubuka kuqala kwe-imeyili kwe-iPad MiniUkuhlolwa kokubuka kuqala i-imeyili kwe-iPad MiniI-iPad RetinaUkubuka kuqala kwe-imeyili kwe-iPad RetinaUkuhlolwa kokubuka kuqala kwe-imeyili kwe-iPad RetinaiPhone 4sUkubuka kuqala i-imeyili ye-iPhone 4sUkuhlolwa kokubuka kuqala i-imeyili kwe-iPhone 4siPhone 5Ukubuka kuqala i-imeyili ye-iPhone 5Ukuhlolwa kokubuka kuqala i-imeyili kwe-iPhone 5iPhone 5sUkubuka kuqala i-imeyili ye-iPhone 5sUkuhlolwa kokubuka kuqala i-imeyili kwe-iPhone 5siPhone 6Ukubuka kuqala i-imeyili ye-iPhone 6Ukuhlolwa kokubuka kuqala i-imeyili kwe-iPhone 6I-iPhone 6 PlusUkubuka kuqala i-imeyili ye-iPhone 6 PlusIsivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili se-iPhone 6 Plusukuhanjiswa kwe-ispukuhlolwa kwe-imeyili kwe-ispi-litmusAmanothi eLotus 6.5Ukubukwa kuqala kwe-imeyili yeLotus Notes 6.5Isivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili seLotus NotesAmanothi eLotus 7Ukubukwa kuqala kwe-imeyili yeLotus Notes 7Isivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili seLotus NotesAmanothi eLotus 8Ukubukwa kuqala kwe-imeyili yeLotus Notes 8Isivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili seLotus NotesAmanothi eLotus 8.5Ukubukwa kuqala kwe-imeyili yeLotus Notes 8.5Isivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili seLotus NotesI-MAC OS XUkubuka kuqala kwe-imeyili kwe-MAC OS XUkuhlolwa kokubuka kuqala kwe-imeyili kwe-MAC OS XAmawindi MICROSOFTUkubukwa kuqala kwe-imeyili kwe-MICROSOFT WINDOWSUkuhlolwa kokubuka kuqala kwe-imeyili kwe-MICROSOFT WINDOWSI-Outlook 2000Ukubuka kuqala i-imeyili ka-Outlook 2000Isivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili se-Outlook 2000I-Outlook 2002Ukubuka kuqala i-imeyili ka-Outlook 2002Isivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili se-Outlook 2002I-Outlook 2003Ukubuka kuqala i-imeyili ka-Outlook 2003Isivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili se-Outlook 2003I-Outlook 2007Ukubuka kuqala i-imeyili ka-Outlook 2007Isivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili se-Outlook 2007I-Outlook 2010Ukubuka kuqala i-imeyili ka-Outlook 2010Isivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili se-Outlook 2010I-Outlook 2011Ukubuka kuqala i-imeyili ka-Outlook 2011Isivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili se-Outlook 2011I-Outlook 2013Ukubuka kuqala i-imeyili ka-Outlook 2013Isivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili se-Outlook 2013I-Optlook.com (Firefox)Ukubuka kuqala i-imeyili ye-Outlook.com (Firefox)Isivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili se-Outlook.com (Firefox)I-Outlook.com ChromeUkubuka kuqala i-imeyili ye-Outlook.com ChromeUhlolo lokubuka kuqala lwe-imeyili le-Outlook.comI-Outlook.com Internet ExplorerUkubuka kuqala i-imeyili ye-Outlook.com Internet ExplorerIsivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili se-Outlook.com Internet ExplorerUmbhalo OngenaluthoUkubuka kuqala kwe-Plain TextUhlolo lokubuka kuqala lwe-Plain Textidumela impimpibuyisela indlelabuyisela enye indlelabuyisela isitifiketi sendlelaisicupho sogaxekileinethiwekhi yesicupho sogaxekileizimbangela zogaxekileI-Thunderbird yakamuva WEB-BASEDI-imeyili yokubuka kuqala ye-imeyili ye-WEB-BASED yakamuva yeThunderbirdIsivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili se-Thunderbird sakamuvaI-Windows Phone 8Ukubuka kuqala i-imeyili kweWindows Phone 8Isivivinyo sokubuka kuqala se-imeyili seWindows Phone 8Yahoo! Imeyili ye-ChromeYahoo! Ukubuka kuqala kwe-imeyili ye-imeyili ye-ChromeYahoo! Ukuhlolwa kokubuka kuqala kwe-imeyili ye-ChromeYahoo! Imeyili FirefoxYahoo! Ukubuka kuqala kwe-imeyili ye-Mail FirefoxYahoo! Ukuhlolwa kokubuka kuqala i-imeyili ye-Mail FirefoxYahoo! Imeyili Internet ExplorerYahoo! Ukubuka kuqala i-imeyili ye-Mail Internet ExplorerYahoo! Ukuhlolwa kokubuka kuqala kwe-imeyili kwe-Mail Internet Explorer
Yini iGoogle RankBrain?
3 B2B Izimiso Zokuthengisa Ukuthi Isu Lakho Kumele Lizihlanganise Namuhla
I-Oct 7, i-2014 ku-2: i-35 PM
Amathuluzi amahle amakhulu wokumaketha i-imeyili, ngicabanga ukuthi abantu bazomangala nge-imeyili uma sebekwazi ukufinyelela kwimininingwane engcono.
Usosayensi wedatha ongathi sína
Aug 16, 2016 ngo-10: 47 PM
Hhayi-ke lokho kuvele kwabulala ukuba semthethweni kwalokhu okuthunyelwe “ama-250ok angabaxhasi besiza sethu futhi ngingumngani omuhle womsunguli uGreg Kraios”
Aug 17, 2016 ku-10: 02 AM
Yebo, ngingumngane kaGreg owayenalo mbono eminyakeni eyishumi edlule futhi manje encintisana nenkampani enkulu enezinsizakusebenza zokumaketha. Ngiyaziqhenya ngokusiza ekusakazeni igama ngekhambi lakhe elimangalisayo. Futhi ngibonga kakhulu ngabaxhasi bethu abasekela le sayithi futhi bangisiza ekunikezeni eminye imininingwane kubafundi bethu. Ukudalulwa kusobala futhi kufanele kushayelwe ihlombe, hhayi ukuhlekwa usulu ngumuntu ophawulayo ongaziwa wesaba kakhulu ukunikeza igama langempela noma ikheli le-imeyili langempela.
Aug 17, 2016 ku-11: 11 AM
Ingabe amanye amakhasimende e-Cert lapha abona ukuvinjelwa kozakwethu be-Return Path? Futhi ngiyabonga ngokusobala, uDouglas! Khumbula, asikho isenzo esihle esingajeziswa. 😉
Aug 17, 2016 ku-11: 45 AM
UDouglas, ngiyabonga ngale ndatshana; Ngiyavuma ukuthi kubalulekile ukwazi ngezinketho zakho lapho ukhetha uzakwethu onikezela ngaye. Ngikhathazekile, nokho, ukuthi awukwazanga ukwethula isimo esingenabandlululo uma uqhathanisa njengoba ninobudlelwano bobungcweti nobomuntu siqu ne-250ok, njengoba kuphawuliwe ekudalweni kwakho. Ngiphinde ngabona imibuzo eminingana ekuhlaziyweni kwakho kwe-Return Path, futhi ngidumele ngokuthi awuzange usithinte ukuze usize ukugcwalisa lezo zikhala. Njengomphathi wokumaketha womkhiqizo wezixazululo zethu ze-imeyili Yokusebenzisa, ngabe ngabe - futhi ngisajabule - ukukusiza ukuphendula leyo mibuzo.
Ukuphendula omunye wemibuzo yakho - yebo, amalungu wethu Iphaneli yenethiwekhi yabathengi anikeze imvume yokubuyisa indlela yokufinyelela ukusetshenziswa kwebhokisi labo leposi nedatha yokuzibandakanya. Ngiyajabula ukunikela ngemininingwane eminingi ngalokhu uma ungathanda.
E-Return Path, siyaziqhenya kakhulu ngemininingwane eyingqayizivele esinika amandla izixazululo zethu kanye nemininingwane le mininingwane enikeza amakhasimende ethu ngayo. Siyazi ukuthi imininingwane eqhutshwa yidatha ibalulekile ekuphumeleleni kohlelo lokumaketha nge-imeyili, futhi kubalulekile ukuthi abathengisi benza izinqumo ngokuya ngemininingwane evela kubabhalisi babo uqobo. Siyaqiniseka ngokusho ukuthi abathengisi be-imeyili abafuna ngempela ukukhulisa uhlelo lwabo lwe-imeyili futhi babone i-ROI ethuthukisiwe evela ku-imeyili bazozuza ngokubambisana ne-Return Path. Njengoba ushilo, sinemininingwane, ubudlelwano bemboni, kanye nolwazi lwe-imeyili lochwepheshe olungasiza abathengisi ukuthi bandise imali yabo evela ku-imeyili ngokwandisa ukufinyelela kwabo nge-imeyili, ukwakha ubudlelwano obungcono bababhalisile, nokwenza ama-imeyili abo abe ngcono ngokuzibandakanya.
Aug 17, 2016 ku-11: 52 AM
Siyabonga ngokuthatha isikhathi sakho ukufinyelela. Akungabazeki ukuthi ububanzi, ukufinyelela, kanye nomkhondo ukuthi i-Return Path ivutha kanjani embonini yokuhambisa. Siyabonga ngokucacisa inkinga yokufinyelela kwedatha.
Umncintiswano uhlale umuhle, futhi sisebenzise i-250ok's toolset ye-ESP yethu, sihlabeke umxhwele ngemiphumela. Ngakho-ke ngenkathi ngiwumngani futhi bangabaxhasi, siphinde sibe iklayenti nomsebenzisi wengxenyekazi yabo. Leyo mpendulo yesikhulumi ayikhethi ngokuphelele - angisoze ngenza izincomo zepulatifomu engingazange ngiyisebenzise mathupha.
Dec 5, 2016 ngo-12: 02 PM
Njengesazi sokukhishwa kwezinto eFrance, ngiyamangala ukuthi uphakamisa ukuthi i-RP ithuthukise ukwenyuka kokusebenza ku-Orange. I-Orange ayisebenzisi isitifiketi se-RP.
Dec 6, 2016 ku-4: 21 AM
Yebo bayakwenza: https://blog.returnpath.com/orange-partners-with-return-path-to-maximise-its-subscribers-email-experience/
Dec 18, 2017 ngo-2: 05 PM
Ngiyafisa ukwazi ngokuqhathaniswa kwamanani futhi. Njengamanje ngisebenzisa ama-250ok njengamanje, kepha ngiyanqikaza ukubhekana nenqubo yedemo ngaphandle kokungazi okungenani ukuqhathaniswa kwezindleko eziphakathi kuka-250ok nendlela ebuyayo